PERIKOPA FJKM ALAHADY 15 MARSA 2014 | FJKM Amboniloha
PERIKOPA FJKM ALAHADY 15 MARSA 2014
Joba 1.13-22 / Jaona 6.1-15 / 2 Timoty 2.14-21
13 Ary tamin’ny indray andro dia nihinana sy nisotro divay teo an-tranon’ny zokiny lahimatoa ny zananilahy sy ny zananivavy;
14 ary nisy iraka tonga tany amin’i Joba ka nanao hoe: Ny omby niasa, ary ny borikivavy nandrasana teo anilany,
15 dia namely azy tampoka ny Sabeana ka namabo azy, ary ny ankizilahy dia nasiany tamin’ny lelan-tsabatra, ary izaho dia izaho irery ihany no afa-nandositra hilaza aminao.
16 Raha mbola niteny izy, dia nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe: Nisy afon’Andriamanitra latsaka avy tany an-danitra ary nandoro ny ondry aman’osy sy ny ankizilahy ka nandevona azy, ary izaho dia izaho irery ihany no afa-nandositra hilaza aminao.
17 Raha mbola niteny izy, dia nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe: Ny Kaldeana nanao telo toko, dia niroatany ny rameva ka nobaboiny, ary ny ankizilahy dia nasiany tamin’ny lelan-tsabatra, ary izaho dia izaho irery ihany no afa-nandositra hilaza aminao.
18 Raha mbola niteny izy, dia nisy anankiray koa tonga ka nanao hoe: Ny zanakao-lahy sy ny zanakao-vavy dia nihinana sy nisotro divay tao an-tranon’ny zokiny lahimatoa;
19 ary, indro, nisy rivotra mahery avy tany an-efitra ka namely ny zoron-trano efatra, dia nianjera tamin’ny zatovo ny trano, ka maty izy rehetra, ary izaho dia izaho irery ihany no afa-nandositra hilaza aminao.
20 Dia nitsangana Joba ka nandriatra ny lambany, ary nanaratra ny lohany, dia niapoka tamin’ny tany ka niankohoka
21 sady nanao hoe: Nitanjaka no nivoahako avy tany an-kibon’ineny, ary mitanjaka no hiverenako any; Jehovah no nanome, ary Jehovah no nanaisotra; isaorana anie ny anaran’i Jehovah
22 Tamin’izany rehetra izany dia tsy nanota Joba, na nanome tsiny an’Andriamanitra.
1 Rehefa afaka izany, dia niala Jesosy ka lasa nita ny Ranomasin’i Galilia, dia ny Ranomasin’i Tiberiasy izany.
2 Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka Azy noho ny nahitany ny famantarana izay efa nataony tamin’ny marary.
3 Ary Jesosy niakatra tao an-tendrombohitra, dia nipetraka tao mbamin’ny mpianany.
4 Fa efa akaiky ny Paska, ilay andro firavoravoan’ny Jiosy.
5 Ary Jesosy nanopy ny masony ka nahita fa nisy vahoaka betsaka nanatona Azy, dia hoy Izy tamin’i Filipo: Aiza no hividianantsika mofo hohanin’ireo?
8 Ny mpianany anankiray, dia Andrea, rahalahin’i Simona Petera, nilaza taminy hoe:
9 Misy zazalahy manana mofo vary hordea dimy sy hazandrano madinika roa, fa ho ampy inona moa izany amin’izao olona betsaka izao?
11 Dia nandray ny mofo Jesosy; ary rehefa nisaotra, dia nizara izany tamin’izay nipetraka hihinana Izy; ary ny hazandrano koa araka izay nilainy.
12 Ary rehefa voky ny olona, dia hoy Jesosy tamin’ny mpianany: Angony ny sisa tsy lany, mba tsy hisy ho very.
13 Dia nangoniny, ka nahafeno harona roa ambin’ny folo ny sombintsombin’ny mofo vary hordea dimy, izay ambiny tsy lanin’ny nihinana.
14 Ary hoy ireny olona ireny, rehefa nahita ny famantarana izay nataon’i Jesosy: Ity tokoa no Ilay Mpaminany Izay ho tonga amin’izao tontolo izao.
15 Ary rehefa fantatr’i Jesosy fa efa ho avy ny olona haka Azy an-keriny hataony mpanjaka, dia niala ka lasa indray Izy irery nankany an-tendrombohitra..
2 Timoty 2.14-21
14 [Ny mety hataon’i Timoty noho ny fisian’ny mpampianatra sandoka] Izany zavatra izany no ampahatsiarovy ny olona, ka anaro mafy eo anatrehan’ny Tompo izy mba tsy hiady teny, satria tsy mahasoa akory izany, fa mamadika ny mpihaino,
15 Mazotoa manolotra ny tenanao amin’Andriamanitra ho olona voazaha toetra, dia mpiasa tsy mahazo henatra, mizara tsara* ny teny fahamarinana. [* Na: mamoaka tsara; na: mizotra mahitsy amin’]
16 Fa halaviro ny fibedibedena foana; fa mbola handroso amin’ny haratsiam-panahy ihany izy ireny,
18 izay nania tamin’ny marina ka milaza fa efa lasa sahady ny fitsanganan’ny maty, dia mamadika ny finoan’ny sasany.
19 Kanefa ny fanorenana mafy nataon’Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tombo-kase izao: « Ny Tompo mahalala ny azy », ary koa: « Aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran’ny Tompo hiala amin’ny ratsy. »
21 Koa raha misy olona manadio ny tenany ho afaka amin’ireny, dia ho fanaka homem-boninahitra izy, efa nohamasinina ka mahasoa ho an’ny Tompo, voavoatra ho amin’ny asa tsara rehetra.
Catégories :	Perikopa FJKM	/ par AnjGab 9 mars 2015